တရုတ် PP သိုင်းကြိုး, အမြင့်ဆန့ဗာဂျင်း PP သိုင်းကြိုး, ယက် PP သိုင်းကြိုး, High Quality PP သိုင်းကြိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:စစသိုင်းကြိုး,အမြင့်ဆန့ဗာဂျင်း PP သိုင်းကြိုး,ယက် PP သိုင်းကြိုး,High Quality PP သိုင်းကြိုး,,
 Homeထုတ်ကုန်များသိုင်းကြိုးPP သိုင်းကြိုး
PP သိုင်းကြိုး (Total 77 Products)
PP သိုင်းကြိုး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, စစသိုင်းကြိုး, အမြင့်ဆန့ဗာဂျင်း PP သိုင်းကြိုး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ယက် PP သိုင်းကြိုး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
သိုင်းကြိုးထုပ်ပိုးစိတ်ကြိုက် polypropylene ချွတ်ပလပ်စတစ်စစ
2020 မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် box ကိုပလပ်စတစ်ကြိုး
ရောင်စုံပုံနှိပ် PP ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးခါးပတ်ကြိုး
ပတ် ၀ န်းကျင် ၁/၂ Poly Plastic Packing သိုင်းကြိုး / PP သိုင်းကြိုး
ရှင်းလင်းသောအဖြူရောင်အပျိုကညာပစ္စည်း pp strapping တီးဝိုင်း
ရောင်စုံစိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ် PP ပလပ်စတစ်ကြိုး
Transparent အရောင် PP ထုပ်ပိုးပလတ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ
စူပါပါးလွှာ 8 မီလီမီတာအဖြူအရောင်စစသိုင်းကြိုး
8 မီလီမီတာအကျယ် x0.5mm အရည်အသွေးမြင့်အဖြူစစသိုင်းကြိုး
အဖြူအရောင် PP ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ
အစိမ်းရောင်အရောင် PP ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ
ရောင်စုံစစထုပ်ပိုးကြိုး / polypropylene ကြိုးတီးဝိုင်း
ခရမ်းရောင်အရောင် PP ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ
ကညာပစ္စည်းအဝါရောင်စက်တန်း PP သိုင်းကြိုး
အပြာရောင်အရောင် PP ချွတ်ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ
Black ကအရောင် PP ချွတ်ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ
သိုင်းကြိုးထုပ်ပိုးထားသောအရောင်ခါးပတ်ပလပ်စတစ် PP Polypropylene ၏ Virgin grade PP သိုင်းကြိုး၏သိပ္ပံနည်းကျသည်ပလတ်စတစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပုံမှန်အားဖြင့် poly.ppylene brushed grade resin ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပလပ်စတစ်ကောင်းခြင်း၊...
PP စွဲစေသိုင်းကြိုး optional ကို အရောင် မော်ဒယ် Glaze OR Knurling auto PP Strapping Band ၏အင်္ဂါရပ်များ: 1. ထူးကဲဆန့ခွန်အား; ၂ ။ စွမ်းဆောင်ရည်မျှလျှော့ချရေးနှင့်အတူ 3. ရေခုခံ။ ၄။ အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားသောစက်များနှင့်လက်အသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ 5....
2019 မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် box ကိုပလပ်စတစ်ကြိုး ဤ အစိမ်းရောင်လေးလံသောပလတ်စတစ်ကြိုး များကို ၁၀၀% PET ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည် ။ ကျွန်တော်တို့သည်, ပေကြိုးထုတ်လုပ်ထားပြီးတင်ပို့ 30 ကျော်နိုင်ငံများနှင့် them.It ထံမှကောင်းသောရလဒ်တွေအများကြီးရ 3...
ရောင်စုံစိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ် PP ပလပ်စတစ်ကြိုး Yalan ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသော pallet strapping roll လုပ်ရန်အရောင် ၁၀ ခုနှင့်ပုံမှန်အရွယ်အစား ၂၀...
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသောပတ်ဝန်းကျင် ၁/၂ Poly Plastic Packing Strap / PP ကြိုးများ ကုန်ကြမ်းအသစ်များ၊ တင်သွင်းသောပစ္စည်းများ၊ သာမန်ပစ္စည်းများသည်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဆွဲအားပြင်းသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရပုံနှိပ်နိုင်သည်။ လိုဂို၊...
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးကြိုး ကုန်ကြမ်းအသစ်များ၊ တင်သွင်းသောပစ္စည်းများ၊ သာမန်ပစ္စည်းများသည်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဆွဲအားပြင်းသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရပုံနှိပ်နိုင်သည်။ လိုဂို၊ ၎င်းတွင်ပါသောစကားလုံးများ၊...
၈ မီလီမီတာအကျယ် x0.5mm အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဖြူစင်းကြိုး Yalan ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသော pallet strapping roll လုပ်ရန်အရောင် ၁၀ ခုနှင့်ပုံမှန်အရွယ်အစား ၂၀...
ရောင်စုံစိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ် PP ပလပ်စတစ်ကြိုး ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ Yalan packing သည်ပုံနှိပ်ထားသော pallet strapping roll ကိုအရောင် ၁၀ ခုနှင့်ပုံမှန်အရွယ်အစား ၂၀ ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။...
Transparent အရောင် PP ထုပ်ပိုးပလတ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ Yalan packing သည်ပုံနှိပ်ထားသော pallet strapping roll ကိုအရောင် ၁၀ ခုနှင့်ပုံမှန်အရွယ်အစား ၂၀ ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။...
စူပါပါးလွှာ 8 မီလီမီတာအဖြူအရောင်စစသိုင်းကြိုး Yalan ထုပ်ပိုး, စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံနှိပ် pallet သိုင်းကြိုးလိပ်စေရန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့ထက်ပိုမို 10 အရောင်များနှင့် 20...
8 မီလီမီတာအကျယ် x0.5mm အရည်အသွေးမြင့်အဖြူစစသိုင်းကြိုး Yalan ထုပ်ပိုး, စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံနှိပ် pallet သိုင်းကြိုးလိပ်စေရန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့ထက်ပိုမို 10 အရောင်များနှင့် 20...
အဖြူအရောင် PP ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ Yalan ထုပ်ပိုး, စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံနှိပ် pallet သိုင်းကြိုးလိပ်စေရန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့ထက်ပိုမို 10 အရောင်များနှင့် 20...
အစိမ်းရောင်အရောင် PP ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ Yalan ထုပ်ပိုး, စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံနှိပ် pallet သိုင်းကြိုးလိပ်စေရန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့ထက်ပိုမို 10 အရောင်များနှင့် 20...
ရောင်စုံစစထုပ်ပိုးကြိုး / polypropylene ကြိုးတီးဝိုင်း optional အရောင် ပုံစံ glaze OR Knurling အော်တို PP သိုင်းကြိုး Band ၏အင်္ဂါရပ်များ: 1. မှလွဲ. ဆန့အစှမျးသတ်တိ; 2. အမြင့်င့်လင်းမြင်သာ။ စွမ်းဆောင်ရည်မလျော့ချရေးနှင့်အတူ 3. ရေခံနိုင်ရည်ရှိသည်။...
ခရမ်းရောင်အရောင် PP ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ Yalan ထုပ်ပိုး, စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံနှိပ် pallet သိုင်းကြိုးလိပ်စေရန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့ထက်ပိုမို 10 အရောင်များနှင့် 20...
ကညာပစ္စည်းအဝါရောင်စက်တန်း PP သိုင်းကြိုး polypropylene ၏ကညာပစ္စည်းနီစက်တန်း PP သိုင်းကြိုးသိပ္ပံနည်းကျအမည်, အဓိကပစ္စည်းကိုယ်မှာ plastic.pp box ရဲ့တစ်ဦးအတော်လေးဘုံကြင်နာသောကွောငျ့ယင်း၏ကောင်းသော plasticity,...
ပုံနှိပ်စစသိုင်းကြိုးပုံနှိပ်ထုပ်ပိုးတီးဝိုင်း ပေါ်မှာစကားလိုဂို print ထုတ်ရန်, client များလိုအပ်ချက်အရသိရသည်နိုင်, ပုံနှိပ်သိုင်းကြိုးသစ်ကိုပစ္စည်းများ, တင်သွင်းပစ္စည်းများ,...
အပြာရောင်အရောင် PP ချွတ်ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ Yalan ထုပ်ပိုး, စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံနှိပ် pallet သိုင်းကြိုးလိပ်စေရန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့ထက်ပိုမို 10 အရောင်များနှင့် 20...
Black ကအရောင် PP ချွတ်ထုပ်ပိုးပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးစက်ရုံ Yalan ထုပ်ပိုး, စိတ်ကြိုက်နှင့်ပုံနှိပ် pallet သိုင်းကြိုးလိပ်စေရန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့ထက်ပိုမို 10 အရောင်များနှင့် 20...
ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှနမူနာကိုယ်မှာအဘို့အပလပ်စတစ်တီးဝိုင်း PP polypropylene ၏ကညာတန်း PP သိုင်းကြိုးသိပ္ပံနည်းကျအမည်, အဓိကပစ္စည်းကိုယ်မှာ plastic.pp box ရဲ့တစ်ဦးအတော်လေးဘုံကြင်နာသောကွောငျ့ယင်း၏ကောင်းသော plasticity အားဆန့ခွန်အားကိုကွေးခုခံအလင်းအလေးချိန်,...
တစ်ပိုင်းအော်တိုစက်များအတွက်စိတ်တိုင်းကျခါးပတ်အဖြူရောင်သိုင်းကြိုး polypropylene ၏တစ်ပိုင်းအော်တိုစက်သိပ္ပံနည်းကျနာမအဘို့ custom ခါးပတ်အဖြူရောင်သိုင်းကြိုး, အဓိကပစ္စည်းကိုယ်မှာ plastic.pp box ရဲ့တစ်ဦးအတော်လေးဘုံကြင်နာကြောင့်ယင်း၏ကောင်းသော...
တရုတ်နိုင်ငံ PP သိုင်းကြိုး ပေးသွင်း
အလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့်ကို semi-automatic စက်နှင့် munual packing.PP ကိုယ်မှာလိပ်ထက်ပိုမို 10 အရောင်များ, အနီ, အစိမ်း, အဝါ, အပြာ, ခရမ်းရောင်, အနက်ရောင်စသည်တို့ကိုပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးရှိပါတယ်များအတွက် PP သိုင်းကြိုးအသုံးပြုသည်။ အသစ်သောပစ္စည်းများ, တင်သွင်းပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း, သာမန်ပစ္စည်းများပလပ်စတစ်ကြိုးဖြစ်စေလျက်, အားကြီးသောဆွဲအင်အားစုရှိပါတယ်။ စစသိုင်းကြိုးလိပ် 19mm5ဖြစ်ပါတယ်ရဲ့ width, အထူ 0.45-1.3mm ဖြစ်ပါတယ်, ဆန့အင်အားသုံး 300kg 40 ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်စစထုတ်ပိုးလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။
စစသိုင်းကြိုး အမြင့်ဆန့ဗာဂျင်း PP သိုင်းကြိုး ယက် PP သိုင်းကြိုး High Quality PP သိုင်းကြိုး စစသိုင်းကြိုး Band